Matongerwo eNyika, 29 Kurume 2018
China 29 Kurume 2018
ZAPU Inoparura Gwaro reHurongwa Hwayo Kana Rakasarudzwa Kutonga Nyika
VaDabengwa vakati gwaro ravo, iro rinotanga nenhoroondo yenyika kusvika pari zvino, rinotarisawo mapoka akaisyana-siyana ehurumende richipa muono webato iri wekuti richange richitungamira sei kana rava hurumende.
Vagari vekuChisumbanje Vopomera Kambani yeGreenfuel Mhosva yeKurimira Zvirimwa Zvavo Pasi
Vamwe vagari vekuMagokova, kuChisumbanje, mudunhu reManicaland vanoti vakatsamwa kuti zvirimwa zvavo zvakarimirwa pasi nekambani yeGreenfuel Pvt Ltd apo vainge vave kukohwa.
VaMnanagagwa Vovimbisa Vana Chiremba Mari, Asi Kuramwa Mabasa Kunoenderera Mberi
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vanonzi vaudza bazi rezvemari kuti ripe imwe mari kuna vanachiremba avo vari kuramwa mabasa kubva kutanga kwemwedzi uno.
Kariba Hydro Power Station Yovandudzwa Kuti Iwedzere Moto weMagetsi
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, nhasi vaparura kutanga kushanda kwezvigayo zvemagetsi ku Kariba muchirongwa chekuvandudzwa kwemagetsi. Chigayo ichi chiri kutarisirwa kubatsira kupedza dambudziko rekushaikwa kwemagetsi munyika.
Vanorwira Kodzero Vosimudzira Kutsvagwa kwaVaDzamara
Imwe shamwari yaVaDzamara, VaCharles Nyoni, vanoti vari kuungana zuva nezuva muAfrica Unity Square nemifananidzo yaVaDzamara kuti vabatsirane nemapurisa kubvunza veruzhinji kana pane akamboonawo murwiri wekodzero uyu.
Vakawanda Votamba Zororo reEaster Vasina Mari
Vagari vekuMasvingo vanoti vari kunetseka zvikuru kuti vawane mari kumabhanga kuitira kuti vakwaniseo kutamba zororo reEaster zvakanaka kana kushanyira hama neshamwari.